Kadib iibsiga Shazam ee Apple, Cortana mar dambe ma aqoonsan karo heesaha | Waxaan ka socdaa mac
Ka dib iibsiga Apple ee Shazam, Cortana mar dambe ma aqoonsan karo heesaha
Bishii Diseembar 11, warka la daabacay maalmo ka hor ayaa la xaqiijiyay, kaas oo lagu sheegay in shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino lahaa Shazam, Codsiga ku dhowaad qof kastaa u adeegsado inuu ku ogaado waxa heesaha ka agdhawaa iyaga iyo inuu awood u yeelan karo inuu hadhow u ciyaaro ama si toos ah ugu maro koontadooda Apple Music, ama Spotify.
Apple waxay shirkadda ka bixisay wax ka badan $ 400 milyan, laakiin sidii caadada u ahayd bayaankii ay Apple u dirtay warbaahinta kamuu wargelin qorshayaasha mustaqbalka ee Apple leedahay iibsigan ka dib, laakiin waxay u badan tahay in sirdoonka macmalka ah ee ay u adeegsato inay ku aqoonsato heesaha, ay ka mid noqon doonaan Siri.
Hadda, tallaabada ugu horreysa ee Apple waxaa laga helaa banaanka shirkadda, tan iyo kaaliyaha Microsoft, Cortana, labadaba Windows 10 desktop version iyo midka mobilada, mar dambe awoodin inuu aqoonsado heesaha. Microsoft, waxay heshiis la gashay Shazam, sida heshiiska u ogolaaday Siri inuu aqoonsado heesaha, inuu aqoonsado heesaha ka jira deegaankeena isagoon isticmaalin dalabka, waana wax ay Caawiyaha Google si toos ah u sameyso iyadoon loo baahneyn inaad Shazam marto waqti aan fogeyn.
Jason Deakins, oo ah injineerka softiweer ee Cortana ayaa ku xaqiijiyay warkan bartiisa Twitter-ka, isagoo sheegay awooddii lagu aqoonsan lahaa heesaha Cortana waa laga saaray ka dib markii la xiray barnaamijka muusigga ee 'streaming' ee Microsoft, Groove Music, bishii Diseembar 31, iyada oo loo gudbinayo macaamiisha in barnaamijku si toos ah ugu leeyahay Spotify. In kasta oo aysan hadda bixinaynin shaqadan, haddaan adeegsanno hawsha jirta, saaxirku wuxuu nagu soo wargelin doonaa farriinta soo socota: Waxaan helay heesta: hees lama aqoonsan. Marka ay bilooyinku sii socdaan, waxaan arki doonaa sida iibka Apple ee Shazam uu u sii wadi karo inuu saameyn ku yeesho shirkado badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Ka dib iibsiga Apple ee Shazam, Cortana mar dambe ma aqoonsan karo heesaha
Apple waxay talaabo sharci ah ka qaadeysaa dadka u ololeeya dhaca dukaan ku yaal Faransiiska
2-3 usbuuc oo rar ah oo loogu talagalay AirPods waa la hayaa